Sat, Jul 4, 2020 at 2:00am
काठमाडौँ, १४ असोज त्रिकोणीय अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। मंगलबार सिंगापुरको इन्डियन एसोसिएसनको मैदानमा भएको खेलमा नेपालमाथि जिम्बावेले ४० रनको जित हात पारेको हो। यसअघि पहिलो खेलमा पनि जिम्बावले नेपाललाई ५ विकेटले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा सिंगापुरलाई ९ विकेटले पराजित गरेपछि नेपालले २ अंक जोडेको थियो। मंगलबार जिम्बावेसँग पराजित भएसँगै नेपालको सिरिज जित्ने लक्ष्य कमजोर बनेको छ। अब नेपालले बुधबार..
जिम्बाब्वेले दियाे १ सय ६१ रनकाे लक्ष्य, नेपाल जवाफी ब्याटिङ गर्दै
काठमाडौँ, १४ असोज सिंगापुरमा जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले जिम्बाब्वेबाट १६१ रनको लक्ष्य पाएको छ । सिंगापुरको इन्डियन एसोसियशन मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वेले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १६० रन बनायो । नेपालले पहिलो ओभरमा नै विकेट लिन सफल भयो । नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले जिम्बावेको खाता नखुल्दै विकेट लिन सफल भए । जिम्बाब्वेका ओपनर ब्रायन चारी खाता खोल्न नपाउँदै..
काठमाडौं, १४ असोज । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप दोस्रो चरण छनोटअन्तर्गत समूह चरणको तेस्रो खेलका लागि आज नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ । यही असोज २३ गते हुने अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलको लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले २३ सदस्यीय नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । छनोट हुने खेलाडीको गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र विशाल श्रेष्ठ छन्..
काठमाडौँ, १३ असोज नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)ले क्यानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध छिट्टै फुकुवा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आइसिसीकै सल्लाह र निर्देशनानुसार काम भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष चन्दले आइसिसीको अक्टोबरमा बस्ने बैठकले क्यानमाथिको प्रतिबन्ध छिट्टै हट्नसक्ने आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा बताउनुभयो । क्रिकेट विकासका लागि गृहकार्य थालिएको भन्दै अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो, “निलम्बन फुकुवाको लागि..
नेपालले मङ्गलबार जिम्बावेविरुद्द खेल्दै, अघिल्लो हारको बदला लिने मौका
काठमाडौँ, १३ असोज सिङ्गापुरमा जारी त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजअन्तर्गत नेपालले मङ्गलबार जिम्बावेसँग दोस्रो खेल खेल्ने भएको छ । सिङ्गापुरस्थित इन्डियन एसोसिएशनको मैदानमा हुने उक्त खेलमा नेपालले जीत हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ टेष्ट राष्ट्र जिम्बावेविरुद्व मैदानमा उत्रनेछ । खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः१५ बजे हुनेछ । उक्त सिरिजअन्तर्गत यसअघि शुक्रबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बावेसँग पाँच विकेटले पराजित भएको थियो । दोस्रो खेलमा नेपालले..
काठमाडाैं, १३ असाेज । जिलियन सुपरस्टार नेयमारले फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन ९पीएसजी० सँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको र क्लबका लागि ज्यानै दिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । पीएसजीका लागि पछिल्ला ४ लिग खेलमध्य ३ खेलमा निर्णायक गोल गरेका नेयमार सिजनको सुरुवातमा बार्सिलोना जाने हल्ला चलेको थियो । नेयमारकै आग्रहमा बार्सिलोनाले औपचारिक प्रस्ताव पनि राखेको थियो, तर पीएसजीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार..
क्रिस्टियानाे राेनाल्डाेकाे गाेलमा युभेन्ट्स विजयी
काठमाडौं, १२ असोज । माउरिजियो सारीको युभेन्ट्सले सिरि एमा अपराजित यात्रालाई जारी राखेको छ ।शनिबार राति भएको खेलमा युभेन्ट्सले स्पाललाई २–० ले हराउँदा क्रिस्टियानो रोनल्डोले गोल गरेका छन् । मिरालिम प्ययानिचले पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पाउलो डिबेला र रोनाल्डोले दोस्रो हाफमा गोल गर्ने मौका पाएका थिए । तर, सफल भएनन् । अन्तत: डिबेलाको सहयोगमा रोनाल्डोले खेल सकिन १२..
काठमाडौँ, ११ असोज नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई पराजित गर्नुभएको हो । आज राजधानीमा सम्पन्न निर्वाचनमा चन्दले ४४ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी पाण्डेले १५ मत पाउनुभयो । यस्तै उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्यमा समेत चन्द समूहका उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । क्यान उपाध्यक्षमा राजबाबु श्रेष्ठ, सचिवमा अशोकनाथ..
काठमाडौँ, ११ असोज सिंगापुर विरुद्ध कप्तान पारस खड्काले बिस्फोटक ब्याटिङ गरेका छन् । कप्तान खड्काले ४९ बलमा शतक पूरा गरे । टी-२० मा खड्काकाे पहिलाे सतक हाे । १५२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालका लागि कप्तान खड्काले शतक बनाउँदा ९ छक्का र ७ चौका प्रहार गरेका थिए । टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको सिंगापुरले तीन विकेटको क्षतिमा १५१ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि करण..
प्रिमियर लिगमा आज ८ खेल हुँदै, यस्ताे छ तालिका
काठमाडाैं, ११ असाेज । इंग्लीस प्रिमियर लिगमा शनिबार ८ खेल हुँदैछन्। आज म्यानचेस्टर सिटी, लिभरपुल, टोटनह्याम र चेल्सीजस्ता बलिया टोली मैदान उत्रँनेछन्। प्रिमियर लिगमा छैठौं चरणको खेल सम्पन्न भइसक्दा अहिलेसम्मको अंकतालिका अनुसार १८ अंक भएको लिभरपुल शीर्ष स्थानमा छ। १३ अंक भएको म्यानचेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा छ। समान ११–११ अंक भएका लेस्टर सिटी, आर्सनल र वेस्ट ह्याम गोल अन्तरका आधारमा क्रमश तेस्रो चौथो र पाँचौं..
क्यान निर्वाचन : ६ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, परिणाम घोषणा ४ बजे
काठमाडौँ, ११ असोज । काठमाडौंमा जारी नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को अहिले जारी निर्वाचन क्रममा ६ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । क्यान निर्वाचनमा महिला सदस्यसहित प्रदेश नम्बर २, ४, ५, ६ र ७ का लागि एक/एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्वाचन कमिटीले निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको हो । क्यानको निलम्बन फुकुवाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको केन्द्रीय चुनाव आज भइरहेको हो । निर्वाचन कमिटीका अनुसार मतदानको..
त्रिकोणात्मक टी–ट्वेन्टी क्रिकेट : जिम्बावेविरुद्ध सन्दीपले ३ विकेट लिए पनि नेपाल पराजित
काठमाडौँ, १० असोज सन्दीप लामिछानेले पावरप्लेमा महत्वपूर्ण ३ विकेट लिए पनि त्रिकोणीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। नेपाललाई शुक्रबार भएको सिरिजको पहिलो खेलमा जिम्बावेले ५ विकेटले पराजित गर्‍यो। नेपालले दिएको १३३ रनको लक्ष्य जिम्बावेले १८.१ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो। जिम्बावेका लागि रायन ब्रुलले नटआउट ४१ रन र रिचमड मुटुम्बानीले नटआउट ४० रनको योगदान दिए। उनीहरुबीच छैटौं विकेटका लागि ६९ रनको..
नेपालले जिम्बावेलाई दियो १३३ रनको लक्ष्य, दीपेन्द्रको सर्वाधिक ४० रन
काठमाडौं, १० असोज सिंगापुरमा सुरु भएको त्रिकोणात्मक टीट्वेन्टी क्रिकेट शृंखलाअन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले जिम्बावेलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ३२ रन जोड्यो। नेपालको पालीमा दीपेन्द्र सिंह एेरीले सर्वाधिक ४० रन बनाए। कप्तान पारस खड्का १८ र सन्दीप जोरा १७ रनमा आउट भए। ओपनर इशान पान्डेले चार..
शूरू भयाे क्यानको साधारणसभा, अध्यक्षमा कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, १० असाेज । काठमाडौंमा आजबाट नेपाल क्रिकेट संघ 'क्यान' को साधारण सभा शुरु भएको छ । सधारण सभाको मुख्य एजेन्डा क्यानको १७ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्नु हो । शनिबारका लागि क्यानको निर्वाचन तोकिएको छ । शुक्रबार साधारण सभा शुरु भएको छ । ओपनिङ शर्तमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, आईसीसीको प्रतिनिधि मोहम्मद..
आज जिम्बाबेविरुद्ध खेल्दै नेपाली टाेली
काठमाडौं, १० असाेज । आज नेपाल, आयोजक सिंगापुर र जिम्बाबेबीचको त्रिकोणात्मक सिरिज सुरु हुँदैछ । नेपालले पहिलो खेलमा आज जिम्बाबेविरुद्ध खेल्ने भएकाे छ । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ५ः१५ बजे सुरु हुनेछ । आईसीसी टि ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेलमा जिम्बाबे र नेपाल पहिलो पटक भिड्दैछन् । सिंगापुर क्रिकेट बोर्डले आगमी अक्टोर १८ देखी नोभेम्बर २ सम्म यूएईमा हुने ग्लोबल टि ट्वान्टी..
नेपालले शुक्रबार टेष्ट राष्ट्र जिम्बाब्वेसँग खेल्दै, कतिको छ जित्ने सम्भावना ?
काठमाडौं, ९ असोज सिंगापुरमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने टी–२० त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले टेष्ट राष्ट्र जिम्बाब्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । इण्डियन एसोसिएसन क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार साझँ नेपाली समयअनुसार ५ बजेर १५ मिनेटमा जिम्बाब्वेसँग नेपालले खेल्न लागेको हो । बलियो टिम जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्दै जित हात पार्ने लक्ष्यमा नेपाली टिम रहेको छ । डबल राउण्ड रोविनको आधारमा सञ्चालन सिरिजमा नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल शनिबार सिंगापुरसँग खेल्नेछ ।..
काठमाडौं, ९ असाेज । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले कप्तान पारस खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गरे गरेपछि उनीहरूबीचकाे सम्बन्ध बिग्रिएकाे कुराले निकै चर्चा पाएकाे छ । कप्तान पारस खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गरेको भन्दै राष्ट्रिय टोलीका अर्का सदस्य सन्दीप लामिछाने चर्चामा छन् । ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा कप्तान खड्कालाई अनफलो गरेपछि सन्दीपमाथि नेपाली क्रिकेट प्रशंसक र फ्यानहरुले विभिन्न आरोप लगाउन थालेका छन्। सन्दीपमाथि फ्यानहरुले..
बिग्रियो पारस र सन्दीपबीचकाे सम्बन्ध !
काठमाडौं, ९ असोज। पछिल्लाे समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेकाे निकै चर्चा हुने गरेकाे छ। पछिल्लो २ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मञ्चमा पाएको सफलताले उनी चर्चाको शिखरमा पुगेका हुन्। सन्दीपले राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्कालाई सामाजिक सञ्जालबाट हटाएको विषयले चर्चा पाइरहेको छ। नेपाली टोली बुधबारै सिंगापुर र ओमान सिरिजका लागि विदेश यात्रामा रहँदा कप्तान पारस र लेग स्पिनर सन्दीपबीचको सम्बन्धलाई..
घरेलु मैदानमै पराजित पीएसजी
काठमाडाैं, ९ असाेज । फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा साविक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन 'पीएसजी' पराजित भएको छ । बुधबार राति भएको खेलमा पीएसजी घरेलु मैदानमा रिम्ससँग २-० ले पराजित भएको हो । रिम्सलाई जित दिलाउन हसाने कामारा र बौलाए डियाले एक-एक गोल गरे । खेलको २९ औं मिनेटमा कामाराको गोलबाट रिम्सले अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा डियाले गोल गर्दै रिम्सलाई २-०..
शुरू भयाे तेक्वान्दोको ओलम्पिक सोलिडारिटी कोर्ष
काठमाडौं, ८ असाेज । बुधबारदेखि तेक्वान्दोको ओलम्पिक सोलिडारिटी कोर्ष सुरु भएको छ। आजदेखि सातदोबाटो स्थित तेक्वान्दो एकेडेमीमा भइरहेको कोर्ष २९ गतेसम्म चल्नेछ। कोर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशिक्षक, जिल्लाहरुमा डोजाङ संचालन गदै आएका तेक्वान्दो प्रशिक्षकले सहभागिता जनाएका छन्। कोर्षको संचालक कोरियन प्रशिक्षक प्रा.डा. इन सिक ह्वाङ रहेका छन्। नवौं डान लिएका ह्वाङलाई नेपालका छौटौं डान लिएका प्रशिक्षक श्रीमान थापा र पुर्ण योञ्जनले प्रशिक्षणमा सहयोग..
सीपीएल बीचमै छाेडेर सन्दीप लामिछाने सिंगापुर जाँदै
काठमाडौँ, ७ असोज करेबियन प्रिमियर लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका सन्दिप लामिछानेले दोश्रो सिजन पनि पुरा सिजन खेल्न नपाउने भएका छन्। बार्बेडोस ट्राइडेन्टको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा मंगलबार छैठौं खेल खेल्ने क्रममा नेपाली लेग स्पिनरले १७ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए। यो सिजन कुल ६ खेल खेल्दा सन्दिपले कुल ८ विकेट लिए। नेपाली रास्ट्रिय टिमले सेप्टेम्बर २७ देखि सिंगापुरमा खेल्ने त्रिकोणात्मक सिरिज र त्यसपछि..
रोनाल्डो र भर्जील भान डाइकलाई पछि पार्दै मेसीले जिते फिफा बेस्ट प्लेअरको उपाधि
काठमाडौँ, ७ असोज । फिफाको ‘प्लेअर अफ दी इअर’ २०१९ को पुरुषतर्फको उपाधि अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेसीले जितेका छन् । सोमबार राति इटालीमा आयोजित अवार्ड घोषणा कार्यक्रममा मेसीले उक्त उपाधि जितेका हुन् । मेसीले दुई प्रतिस्पर्धी क्रिस्टयानो रोनाल्डो र लिभरपुलका खेलाडी भर्जील भान डाइकलाई उछिन्दै यो उपाधि हात पारेका हुन् । मेसीले २०१८–२०१९ को सिजनमा बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि दिलाएका थिए..
साफ यु–१८ : बङ्गलादेश सेमिफाइनलमा, नेपाल प्रतियोगिताबाटै बाहिरिने सम्भावना
काठमाडौँ, ६ असोज बङ्गलादेश तेस्रो संस्करणको दक्षिण एशियाली खेलकूद (साफ) यु–१८ फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को मैदानमा आज भएको खेलमा भारतसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै बङ्गलादेश सेमिफाइनल पुगेको हो । खेल अवधिभर दुवै टोलीले गोल गर्ने थुपै्र अवसर खेर फालेका थिए । समूह ‘बी’मा रहेको बङ्गलादेशले दुई खेलमा चार अङ्क जोड्दै सेमिफाइनल पुगेको हो । बङ्गलादेशले..
दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) क्रिकेट कात्तिकमा
काठमाडौँ, ६ असोज सर्वाधिक पुरस्कार राशि भएको दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कात्तिक अन्तिम सातादेखि शुरु हुने भएको छ । प्रतियोगिता आगामी कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म सञ्चालन गरिने क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा क्रिकेट रङ्गशालामा आयोजना हुने प्रतियोगितामा विभिन्न ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीमा विराटनगर..
फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड आज : यीमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडाैं, ६ असोज विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले सन् २०१९ को उत्कृष्ट फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड सोमबार राति इटालीको मिलानमा विशेष कार्यक्रमबीच प्रदान गर्दैछ । मनोनयनमा परेका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा लियोनल मेस्सी (बार्सिलोना/अर्जेन्टिना), क्रिस्टियानो रोनाल्डो (युभेन्टस/पोर्चुगल) र भर्जिल भान डाइक (लिभरपुल/नेदरल्यान्ड्स) रहेका छन् । उत्कृष्ट पुरुष गोलरक्षकतर्फ लिभरपुलर/ब्राजिलका एलिसन बेकर, म्यानचेस्टर सिटी/ब्राजिलका एन्डरसन र बार्सिलोना/जर्मनीका मार्क टेर स्टेगेन छन् । उत्कृष्ट पुरुष प्रशिक्षकतर्फ..
काठमाडौँ, ६ असोज । अनेरास्ववियू रामेछापले प्रथम रामेछाप कप फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । आइतबार भएको फाइनल खेलमा लिखु भुजी युवा क्लब रामेछापलाई टाई ब्रेकरमा २–० ले पराजित गर्दै अनेरास्ववियूले उपाधि जितेको हो । शान्तिनगरस्थित शान्तिनगर फुटसलमा भएको फाइनल खेल निर्धारित समयसम्म गोलरहित टुङ्गिएपछि टाई ब्रेकरमार्फत विजेताको टुङ्गो लगाइएको थियो । टाई ब्रेकरमा अनेरास्ववियूका दुई खेलाडीले गोल गर्दा लिखु भुजीका कुनै पनि..
काठमाडौँ, ५ असोज राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपाल भुटानसँग पराजित भएको छ । हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलएपिएफ)को मैदानमा आज भएको खेलमा साविक विजेता नेपाल भुटानसँग ३–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । हारसँगै समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना न्यून बनेको छ । यससँगै दुई खेल खेलेको नेपालको एक अङ्क मात्र छ । नेपालले..
काठमाडाैं, ५ असाेज । साफ यू–१८ फुटबल च्याम्पियनसिपको समूह चरणमा नेपाल भुटानसँग एक–शून्इ गोल अन्तरले पछाडि परेको छ । सशस्त्र प्रहरीको हलचोंकमा भइरहेको खेलको पहिलो हाफमा नेपाल पछाडि परेको हो । राम्रो अवसर गुमाएको नेपालले खेलको ४०औं मिनेटमा गोल खानु परेको थियो । नेपाल भुटानलाई हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्न चाहन्छ । यसअघि माल्दिभ्स विरुद्धको खेलमा नेपाल एक–एक गोलको बराबरीमा रोकिदै अंक बाड्न..
काठमाडौँ, ५ असोज । बार्सिलोनाले आफ्नो पुराना र नयाँ सबै स्टार खेलाडी उतारे पनि शनिबार राति स्पेनी ला लिगामा ग्रेनेडासँग २–० को हारबाट जोगिन सकेन । पूर्णतः फिट हुन बाँकी लियोनल मेसी र अन्सु फाटी वेञ्चबाट आएर खेले । ग्रेनेडाले भने रोमन एजिजको गोलले अग्रता लिएको थियो । अरटुरो भिडालले बल ह्यान्ड गरेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा अल्भारो भाडिलोले दोस्रो गोल थपे । यो नतिजापछि..
काठमाडौँ, ३ असोज । जोर्डनमा जारी एएफसी यु–१६ च्याम्पियनसिप छनोटअन्तर्गत नेपालले आज तेस्रो खेल ताजिकिस्तानसँग खेल्दैछ । जोर्डनको जार्का सिटीस्थित प्रिन्स मोहम्मद अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालामा नेपालले जित निकाल्ने उद्देश्यका साथ बलियो प्रतिद्वन्द्वी ताजकिस्तानको सामना गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति १०ः४५ बजे हुनेछ । यसअघि खेलेको अघिल्ला दुई खेलमा नेपालले एक अङ्क जोडेको छ । पहिलो खेलमा घरेलु टोली जोर्डनसँग नेपाल ७–० गोलअन्तरले..
Results 1924: You are at page 12 of 65